Fiber Optical Terminal Bhokisi Vagadziri & Vatengesi | China Fiber Optical Terminal Bhokisi Fekitori
FTTH Fiber Optical Chiso Bhokisi ZJ402
Mhedziso Iyi mini dhizaini yekuparadzira bhokisi rinoshandiswa zvakanyanya muFTTX network kubatanidza donhwe tambo uye ONU zvishandiso kuburikidza nefibre port. Inotsigira kukanda, kugovera, mehendi yekubatanidza uye kumadziro yakamisikidzwa kumisikidzwa. Iko kugona kweiri bhokisi kunogona kuve 1 musimboti, 2 macores, 4 cores. Zvimiro ● ABS zvinhu zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvinoita kuti muviri uve wakasimba uye wakareruka. ● Kuisa kuri nyore: Kwidza pamadziro kana kungoisa pasi. ● Kuchekesa tireyi kunogona kubviswa pazvinenge zvichidiwa kana panguva yekumisikidzwa kweye conven ...
FTTH Fiber Optical Chiso Bhokisi ZJ401
Pfupiso EFON FDB-004C yekuparadzira bhokisi inogumisa imwe fiber optic tambo ine anosvika mana macores, kuunza kwakakosha kuvandudza kunoguma zvirinani mutengi ruzivo kana FTTH ichifanirwa kuendeswa. Zvimiro ● ABS zvinhu zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvinoita kuti muviri uve wakasimba uye wakareruka. ● Kuisa kuri nyore: Kwidza pamadziro kana kungoisa pasi. ● Kuchekesa tireyi kunogona kubviswa pazvinenge zvichidikanwa kana panguva yekumisikidzwa kweiri nyore mashandiro uye kumisikidza; ● Adapter slots yakagamuchirwa - Hapana screws inodiwa ...
FTTH Fiber Optical Chiso Bhokisi ZJ202
Iri mini dhizaini rekuparadzira bhokisi rinoshandiswa zvakanyanya muFTTX network kubatanidza donhwe tambo uye ONU zvishandiso kuburikidza nefibre port. Inotsigira kukanda, kugovera, mehendi yekubatanidza uye kumadziro yakamisikidzwa kumisikidzwa. Iko kugona kweiri bhokisi kunogona kuve 1 musimboti, 2 macores. Zvimiro ● ABS zvinhu zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvinoita kuti muviri uve wakasimba uye wakareruka. ● Kuisa kuri nyore: Kwidza pamadziro kana kungoisa pasi. ● Kuchekesa tireyi kunogona kubviswa pazvinenge zvichidikanwa kana panguva yekumisikidzwa kweiri nyore oparesheni uye ...
Telescopic FTTH Fiber Optical Chiso Bhokisi ZJ201
Iri mini dhizaini rekuparadzira bhokisi rinoshandiswa zvakanyanya muFTTX network kubatanidza donhwe tambo uye ONU zvishandiso kuburikidza nefibre port. Inotsigira kukanda, kugovera, mehendi yekubatanidza uye kumadziro yakamisikidzwa kumisikidzwa. Iko kugona kweiri bhokisi kunogona kuve 1 musimboti, 2 macores uye mana cores. Zvimiro ● Zvinhu zveABS zvinoshandiswa zvinoita kuti muviri uve wakasimba uye wakareruka ● Kuiswa kuri nyore: Kukwira pamadziro ● Kushanda nyore: plug fiber isina chikonzero chekuvhura goko ● Fibhi tambo inlet kubva kumativi ese, kutsigira iyo ...
FTTH Fiber Optical Chiso Bhokisi ZJ101
Mhedziso Iyi mini dhizaini yekuparadzira bhokisi rinoshandiswa zvakanyanya muFTTX network kubatanidza donhwe tambo uye ONU zvishandiso kuburikidza nefibre port. Inotsigira kukanda, kugovera, mehendi yekubatanidza uye kumadziro yakamisikidzwa kumisikidzwa. Iko kugona kweiri bhokisi kunogona kuve 1 musimboti, 2 macores. Zvimiro ● ABS zvinhu zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvinoita kuti muviri uve wakasimba uye wakareruka. ● Kuisa kuri nyore: Kwidza pamadziro kana kungoisa pasi. ● Adapter slots yakagamuchirwa - Hapana screws inodiwa pakuisa maadapter. ● Plug fiber pasina chikonzero ...
FTTH Fiber Optical Chiso Bhokisi ZJ102
Mhedziso Iyi mini dhizaini yekuparadzira bhokisi rinoshandiswa zvakanyanya muFTTX network kubatanidza donhwe tambo uye ONU zvishandiso kuburikidza nefibre port. Inotsigira kukanda, kugovera, mehendi yekubatanidza uye kumadziro yakamisikidzwa kumisikidzwa. Iko kugona kweiri bhokisi kunogona kuve 1 musimboti, 2 macores. Zvimiro ● Zvinhu zveABS zvinoshandiswa zvinoita kuti muviri uve wakasimba uye wakareruka ● Kuiswa kuri nyore: Kukwira pamadziro ● Fibhi tambo inlets kubva kumativi ese, ichitsigira mataipi emakesi ezviitiko zvakasiyana. ● Adapter inogamuchirwa: SC, ...